नेपाली बालकका खुट्टाका औंला हातमा प्रत्यारोपण – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
नयाँदिल्ली, ७ कात्तिक। सफ्दरगञ्ज अस्पतालका चिकित्सकहरुले एक १० वर्षीय नेपाली बालकको औंला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरनुभएको छ । बालकको खुट्टाका दुई औंला शल्यक्रियामार्फत् हातमा प्रत्यारोपण गरिएको हो । सन् २०१५ मा आगलागीमा परी बालकको हातका औंला गुमेका थिए । अस्पतालका प्लास्टिक सर्जरी विभागका प्राध्यापक राकेश कैनका अनुसार बालकको नाडी आगोका कारण फैलिएको थियो ।
शल्यक्रियाको क्रममा बालकको एक हात नाडीबाट र अर्को औंलादेखि पाखुरासम्म काट्नु परेको थियो । हात काम गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए । कलम समाउन पनि सक्दैनथे, । सोही कारण बालकको आत्मविश्वास कम भएको थियो । चिकित्सकहरुले खुट्टाका औंला हातमा ल्याएर जोड्ने विधि अपनाएपछि । १० घण्टाको शल्यक्रिया क्रममा आगोबाट जलेको भागमा रक्तसञ्चार पुनः सुरु गराउन चिकित्सकहरुले सफलता पाउनुभयो ।
‘यो प्रक्रिया एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो र लामो समय बेहोसीमा राख्नुपर्ने थियो,’ डा. कैनले भन्नुभयो, ‘तर, माइक्रोभास्कुलर रक्तप्रवाह कायम राख्न औंला प्रत्यारोपण जरुरी थियो । उहाँका अनुसार शल्यक्रिया असफल भएको भए ती बालक मानसिक आघातमा पर्नेसक्ने थिए । ‘अब उनी आफ्नो नियमित काममा फर्किन सक्ने भएका छन्,’ डा. कैनले बताउनुभयो।